Sydney Harbour & Opera House | NU MYAT AROUND THE WORLD
ဆစ်ဒနီမြို့မှ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လူလုပ်ဆိပ်ကမ်းနှင့်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြို့ကြီးများ၌ လူလုပ်ဆိပ်ကမ်း၊ သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ဆိပ်ကမ်းစသဖြင့် ဆိပ်ကမ်းများစွာရှိသည့်အနက် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ အကြီးဆုံးသဘာဝဆိပ်ကမ်းကြီးပင် ဖြစ်သည်။ တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ်္ဒရာရှိ တက်စမန်ပင်လယ်၏ ရေလက်ကြားတစ်ခု ဖြစ်သည့် ယင်းဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းသည် မိုင်ပေါင်း ၁၉၇ မိုင်အထိ ရှည်လျားလှပါသည်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်သည့်အပြင် သြစတြေးလျတိုက်သို့ ဥရောပနိုင်ငံသားများ ပထမဆုံး အခြေချနေထိုင်ခဲ့သည့် နေရာဖြစ်၍လည်း သမိုင်းကြောင် အရ အရေးကြီးအခန်းကဏ္ဍ၌ ပါဝင်နေပါ၏။ ၁၇၇၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဗြိတိသျှ စစ်ဗိုလ် ဂျိမ်းစ်ကွတ်ခ်ဆိုသူက ဤဆိပ်ကမ်းကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှရေတပ်အရာရှိ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂျော့ခ်ျဂျက်ခ်ဆန်ဆိုသူကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဂျက်ခ်ဆန် သင်္ဘောဆိပ် (Port Jackson) ဟု အမည်ပေးခဲ့ရာ ယနေ့တိုင် အမည်တွင်ဆဲဖြစ်၏။
ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် အရေးပါသလို လှပသော ကမ်းခြေများ၊ တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေသော ရေပြင်များ၊ ကမ်းစပ်နှင့် ကျွန်း များပေါ်ရှိ သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံများကြောင့်လည်း ပြည်တွင်းပြည်ပဧည့်သည်များနှင့် စည်ကားလျက်ရှိသည့် အပန်းဖြေနေရာတစ်ခုဖြစ်၍ နေပါသည်။
ဆိပ်ကမ်း၏ အလှအပကို ခံစားရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ ဆိပ် ကမ်းတစ်လျှောက်ပြေးဆွဲနေသည့် အပျော်စီး သင်္ဘောများ၌ လိုက်ပါစီးနင်းခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ဆစ်ဒနီမြို့သို့ အလည်လာသူတိုင်း ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်း၌သင်္ဘောစီးရင်း အပန်းဖြေလေ့ရှိရာ တစ်နှစ်လျှင် သင်္ဘောအသီးသီး၏ပြေးဆွဲသည့်ခေါက်ရေပေါင်း ၁၅ သန်းမျှ ရှိသည်ဟု သိရ၏။ စာရေးသူ ယခုနှစ် ဧပြီလ၌ ဆစ်ဒနီရောက်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ဆစ်ဒနီမြို့၏ အထင်ကရဆိပ်ကမ်းတစ်လျှောက် အပျော်စီးသင်္ဘောစီးဖြစ် ခဲ့ပါ၏။ ဆိပ်ကမ်း၌ အကြီးဆုံးနှင့် အစည်ကားဆုံး သင်္ဘောဆိပ်ဖြစ်သည့် Circular Quay မှ ထွက်သည့် နှစ်ထပ်သင်္ဘောဖြစ်၍ အသွားအပြန်နှစ်နာရီနီးပါးကြာကာ နေ့လယ်စာ ပင်လယ်စာဘူဖေးအပါအ၀င် ဒေါ်လာခုနစ်ဆယ်ဝန်းကျင် ကျသင့်ပါ၏။ လမ်းတစ်လျှောက်၌လည်း ဆစ်ဒနီပြဇာတ်ရုံ (Sydney Opera House) ၊ ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းတံတား၊ အမျိုးသားပန်းဥယျာဉ်စသည့် အထင်ကရနေရာများနှင့် သမိုင်းအရရော၊ ယဉ်ကျေးမှုအရပါ အရေးပါသည့် ကျွန်းများကို ဖြတ်သန်းသွားကာ ရှုခင်းအလှအပများကို ခံစားရင်း အရသာရှိသော ပင်လယ်စာ ဘူဖေးကို စားသောက်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားပါ၏။
ဤကဲ့သို့ အသွားအပြန်မဟုတ်ဘဲ နှစ်သက်ရာနေရာသို့ ဆင်း၍ လေ့လာနိုင်ရန် Hop-on Hop off သင်္ဘောများသည်လည်း သူ့အချိန်စာရင်းနှင့်သူ ပြေးဆွဲနေ၍ နေ၀င်ချိန်ကြည့်သည့် သင်္ဘော၊ ဝေလငါးကြည့်သည့်သင်္ဘော၊ ဆိပ်ကမ်းတစ်လျှောက် အထင်ကရနေရာများကို ရှင်းလင်းပြသသည့် သင်္ဘောစသဖြင့် သင်္ဘောခရီးစဉ်များစွာ ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်းလည်း သိရ၏။ အချို့ဆိုလျှင် ရွက်လှေများ၊ မော် တော်ဘုတ်များ၊ ငါးဖမ်းလှေများ သီးသန့်ငှားရမ်းကာ ရေထဲ၌ အေးအေးဆေးဆေး အပန်းဖြေနေကြသည်ကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါ၏။
ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းနှင့် Circular Quay သို့ သွားလည်သူများသည် သင်္ဘောဆိပ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့် လမ်းလျှောက်ရုံဖြင့် ရောက်နိုင်သည့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အထင်ကရ ဆစ်ဒနီပြဇာတ်ရုံသို့လည်း သွားရောက်လေ့လာလေ့ ရှိကြပါသည်။ ထူးခြားဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်၍ ၂၀ ရာစုအတွင်း အကောင်းဆုံး ဗိသုကာ လက်ရာတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံခဲ့ရကာ သက်တမ်းအားဖြင့် အလွန်မရှည်ကြာသည့်တိုင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် အဆောက်အအုံအဖြစ် UNESCO မှ သတ်မှတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါ၏။ ၁၉၅၇ ခုနှစ်က ဤပြဇာတ်ရုံအတွက် ဒီဇိုင်းများ ယှဉ်ပြိုင်စေခဲ့ကာ အနိုင်ရခဲ့သည့် ဒီဇိုင်းကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်း ၁၂၀ အကုန်ခံကာ ၁၅ နှစ်ကြာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍအသီးသီးအတွက် အခန်းပေါင်း ခုနစ်ခန်းရှိကာ တစ်နှစ်လျှင် ပွဲပေါင်း ၁၅၀၀ ဖျော်ဖြေလျက်ရှိကြောင်း၊ ပွဲကြည့်ပရိသတ် ပေါင်း ၁ ဒသမ၂သန်းခန့်နှင့် လာရောက်လေ့လာသူပေါင်း ခုနစ်သန်းခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဆစ်ဒနီဆိပ်ကမ်းသည် အပျော်စီးသင်္ဘောငယ်များ၊ ရွက်လှေများ၊ လှေငယ်များ ဖြင့် ရေပြင်ပေါ်၌ လှုပ်ရှားသက်ဝင်ရုံမျှမက ဆိပ်ကမ်းတစ်လျှောက် မြေပြင်ပေါ်၌လည်း စားသောက်ဆိုင်များ၊ အမှတ်တရပစ်္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ ပြခန်းများဖြင့် ခရီးသွား များအလွန်စည်ကားလျက်ရှိရာ ဆစ်ဒနီမြို့သို့ အလည်သွားသူတိုင်း မရောက်မဖြစ် လေ့လာသင့်သည့် နေရာဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုချင်ပါတော့သည်။
This entry was posted in Australia, Heritage, Travel, Uncategorized and tagged Australia, Nature, Travel. Bookmark the permalink.
← Great Wall of China, World’s Longest Structure
Borobudur , World Largest Buddhist Temple →